Atọ Knutby Pastọ prosecuted | Apg29
Atọ Knutby Pastọ prosecuted
Atọ bụbu ndị ozi nke Philadelphia Church Knutby ga-prosecuted on Wednesday.
Otu nke na-azara ọnụ ga-Esa Waldau, bịara mara dị ka nwunye ọhụrụ nke Kraịst mgbe igbu ọchụ nke a pastọ nwunye na nwara igbu ọchụ nke a agbata obi Knutby na 2004.
The ọfịs ọkàiwu kwuru na boro banyere ọtụtụ ikpe nke a na-emeso na n'ụzọ mmekọahụ nke dabere onye.
Na magazine The ụbọchị nwere ụlọakwụkwọ Rigmor Robert gwara banyere ịzụ atụrụ na-ekwu okwu na e nwere na chọọchị, dị iche iche nke n'ụzọ mere ka ugboro, onye kwewo, tufts nke ntutu e laa n'iyi, ọ agwọ tara, na n'ụzọ mmekọahụ ka mere.
Na akwụkwọ akụkọ Expressen kwuru prosecutors Liselotte Herschend nwunye ọhụrụ nke Kraịst (Esa Waldau) anaghị enyo enyo mmekọahụ mpụ. Ọ na-enyo enyo nke mmegbu.
Nke atọ ebubo pastọ bụ naanị onye a ga-prosecuted maka mmekọahụ nēkpuchi.
Murder na Knutby
Ọ bụ na 2004 na igbu ọchụ na ịnwa igbu ọchụ ada itie ke esop Christian ke Philadelphia Knutby.
Nke a nweela obosara ntị na Swedish media na nke e dere na ọtụtụ akụkọ na isiokwu. Ha nwekwara mmasị ntị ka nwunye ọhụrụ nke Kraịst na-akụzi na ya.
"Ihe a na obere mara bụ na Knutby ọgbakọ agọnahụ na Jizọs bụ Chineke. Nke a bụ nnọọ njọ."
Nwunye ọhụrụ nke Kraịst School
Christ chick ozizi na-akpọkarị ke Knutby. Ma nke a heresy bụ n'ezie ihe ọ bụla pụrụ iche ka Knutby.
Ozizi a ka ogologo adị n'ime Catholic Church . Gịnị bụ ikekwe pụrụ iche na Knutby bụ na ha na o yiri ka ha onwe ha niche na ya.
Agọnahụ na Jizọs bụ Chineke
Gịnị na-obere mara bụ na Knutby ọgbakọ agọnahụ na Jizọs bụ Chineke . Nke a bụ nnọọ njọ.
Ị na-agọnahụ na Jizọs bụ Chineke - mgbe ị na-ekwetaghị na ọ bụ ya bụ Jehova, na mgbe ị nwere ike-azọpụta!
"On 20 May 2018 bụ Philadelphia Church Knutby ala. Mgbe ahụ e nwere nanị abụọ òtù."
The chọọchị na-emechi na 2018
1921 tọrọ ntọala Knutby Philadelphia ka a Pentecost mgbakọ.
N'oge nke igbu ọchụ na ịnwa igbu ọchụ na 2004, Philadelphia Church banyere 90 òtù. E nwere ugboro abụọ dị ọtụtụ dị ka n'ihu Esa Waldau nwere.
On 20 May 2018 bụ Philadelphia Church Knutby ala. Mgbe e nwere nanị abụọ òtù.
Vecka 34, söndag 25 augusti 2019 kl. 09:53